Steve Jobs ရဲ့ Apple ကို ပုံဖျောထုဆဈနိုငျခဲ့တဲ့ အဓိက အခကျြမြား
Apple ကို ၁၉၇၆ ခုနှဈက Steve Jobs နဲ့ Ronald Wayne တို့ မှ စတငျတညျထောငျခဲ့ပါတယျ။Apple ဟာ ယနခေ့တျေမှာဆိုရငျ အဆငျ့အတနျးမှီမှီ iPhone တှထေုတျပွီး နာမညျအတျောလေး ရနတေဲ့ Brand တဈခုပါ။
Apple ဟာ ယခုဆို ကွီးမားတဲ့ ပရိသတျ တဈစုကို ပိုငျဆိုငျထားပွီ ဖွဈပွီး ထိုသို့ ပိုငျဆိုငျထားရခွငျးမှာလညျး ၎င်းငျး တို့ အနနေဲ့ အသညျးအသနျအားပေးသူမြားပွားလာရခွငျးမှာ ခတျေရှပွေ့ေး တဲ့ ဒီဇိုငျးနဲ့ features အသဈတှကွေောငျ့ပါပဲ။
၎င်းငျးတို့ရဲ့ အားသာခကျြက နညျးပညာပွောငျးလဲ လာခွငျးကို အမွဲ မကျြစိဖှငျ့ ပွီး သူ့ ပစ်စညျးရဲ့ အရအေသှေး ကို ထိနျးသိမျးထားလို့ ဖွဈမယျသိရပါတယျ။အခွား ပွိုငျဘကျ မိုဘိုငျလျးဖုနျးထုတျတဲ့ လုပျငနျးစုတှကေ Apple ကို လိုကျတုကွတယျ ဈေးတှကေို ဈေးကှကျမှာ
လြော့ ပေါ့ ပွီး တဈဝကျဈေးနညျးနညျး နဲ့ ရောငျးကတြယျ သို့ပမေဲ့ ( Think Different / ကှဲပွားခွားနားစှာတှေးပါ ) ဆိုတဲ့ သူမတူအောငျအမြား နဲ့ မတူတဲ့ Apple ကို ဘယျသူမှ မကြျောနိုငျခဲ့ပါဘူး Apple က သူ့ရဲ့ ပစ်စညျး အရညျအသှေးနဲ့ ဈေးကှကျခြဲ့ထှငျရေး ဗြူဟာတှကေိုက ကောငျးမှနျလှနျးတာကိုး။
Apple ဟာ သူ့ Brand ကို ကမ်ဘာ့နရော အသီးသီး မှာ ဖွနျ့ကကျြထားပွီး နိုငျငံ ၄၀ မှာ ရှိပါတယျ အရောငျးဆိုငျအားဖွငျ့ ၅၁၂ ဆိုငျရှိပါတယျ။၎င်းငျးရဲ့ iPhone ပထမ မြိုးဆကျကို ၂၀၀၇ ခုနှဈထုတျလုပျခဲ့ တာဖွဈပွီး ၊ ယခုဆို iPhone 11 Pro Max ထိတောငျရောကျနပေါပွီ။
Online Store ကနရေောငျးခခြွငျး
၁၉၉၇ မှာ Steve Jobs က Apple ကို ပွနျလာခဲ့ပါတယျ။ Apple ကို ပွနျလာ ဆို သူတို့ လုပျငနျးစု နဲ့ Dell လုပျငနျးစု အခငျြးမြားခဲ့လို့ပါ
ထိုစဉျ Dell ရဲ့ တညျထောငျသူ ဖွဈသူ နဲ့ CEO ဖွဈသူ Michael Dell နဲ့ Apple ဘကျမှ စကားအနညျးငယျပွောခဲ့ပါတယျ ' Apple ကို ဘယျလို ကောငျးအောငျလုပျမယျ ' ဆိုတာကိုပေါ့။
ဒါကိုတောငျမှ Dell အနနေဲ့ သူ့ရဲ့ အစုရှယျရာငှကေိုသာ ပွနျလညျတောငျးယူခဲ့ပါတယျ။Dell ဟာ ထိုအခြိနျ တဈခတျေတဈခါက အှနျလိုငျးဈေးရောငျး ခွငျး နဲ့ အောငျမွငျနတေဲ့ အခြိနျဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့ Online Store ကို NeXT နဲ့ တညျဆောကျထားကာ ရောငျးနခြေိနျပဲဖွဈပါတယျ။
" အကယျ၍ သငျအနနေဲ့ သငျအရမျး စိတျအားထကျသနျပွီး စိတျနှဈထားတဲ့ အလုပျတဈခုကို လုပျမယျဆိုရငျ ,
သငျ့ ကို သငျ တှနျးနစေရာ မလိုပါဘူး , သငျ့ရဲ့ အမွငျတှကေ သငျ့ကို ဆှဲချေါသှားပါလိမျ့မယျ " ပွောကွားသူ Steve Jobs .
Steve က Apple ရဲ့ Founder ဖွဈတဲ့ အလြှောကျ Dell နဲ့ Apple စကားမြား အခငျြးပှား နခြေိနျ Apple ဆီကို ပွနျလာကာ NeXT က ဝနျထမျးအနညျးငယျနဲ့ ၎င်းငျးတို့ Online Store ကို သူကိုယျတိုငျ စိတျနှဈကာ တညျဆောကျခဲ့ပါတယျ။
ထိုအခြိနျ Steve Jobs စိတျထဲမှာရှိတာက ဈေးကှကျနဲ့ အကြှမျးတဝငျရှိဖို့ နညျးလမျးက အှနျလိုငျး ကနရေောငျးခြ ခငျြးသာ ဖွဈတယျ ဒါ့ထကျ အှနျလိုငျးအရောငျး လောက မှာ Dell ထကျခွတေဈလှမျးသာနရေမယျဆိုတာပါပဲ ။
၁၉၉၇ ရဲ့ နိုဝငျဘာလမှာ Apple ရဲ့ စာနယျဇငျးရှငျးလငျး ပှဲမှာ ၎င်းငျးတို့ Online Store အကွောငျးကိုဖျောပွသှားခဲ့ပါတယျ။
Apple ရဲ့ ပွောငျးလဲခဲ့တဲ့ အခကျြမြားကို ပွောပွရမယျဆိုလြှငျ -
၁ . ကွျောငွာ ကိစ်စ ရပျတှအေတှကျ လိုအပျခကျြကို ထပျတလဲလဲ တှေးပါ
၂ . ဈေးကစားခွငျးကို ရှောငျကွညျပွီး သငျ့အတှကျသငျ့လြျောတဲ့ ပမာဏကိုသာမကျမောပါ
၃ . သငျ့ရဲ့ ဈေးကှကျမွှငျ့တငျရေးကိစ်စတှနေဲ့ သငျ့ရဲ့ Product ကို ရိုးရိုရှငျးရှငျးလေးဖွဈနပေါစေ
၄ . သငျ့ကို အားပေးတဲ့ လူတဈစု ရဲ့အကွောငျးကို ကောငျးကောငျးသိထားပါ
၅ . ကာစတနျမာတှရေဲ့ ခံစားခကျြကို ရှေးရှုပွီး ဒီဇိုငျးလုပျဆောငျပါ။
၆ . သငျ့ စိတျခံစားခကျြအလိုကျ ရညျမှနျးခကျြထားတတျပါစေ
၇ . သငျ့ Product ရဲ့ အသုံးပွုသူတှနေဲ့ Community တဈခု တညျဆောကျပါ။
ထို အခကျြတှဟော Apple ရဲ့အခကျြအလကျဗြူဟာ မြားဖွဈပွီး ၎င်းငျး တို့ လုပျငနျးစု အနနှေငျ့လညျး ယခုလကျရှိမှာ အသုံးပွု နတေယျသိရပါတယျ။သုတ အဖွဈဖတျရှုသူအားလုံးအတှကျရညျရှယျပါတယျ။
Steve Jobs ရဲ့ Apple ကို ပုံဖော်ထုဆစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဓိက အချက်များ
Apple ကို ၁၉၇၆ ခုနှစ်က Steve Jobs နဲ့ Ronald Wayne တို့ မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။Apple ဟာ ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် အဆင့်အတန်းမှီမှီ iPhone တွေထုတ်ပြီး နာမည်အတော်လေး ရနေတဲ့ Brand တစ်ခုပါ။
Apple ဟာ ယခုဆို ကြီးမားတဲ့ ပရိသတ် တစ်စုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီ ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ပိုင်ဆိုင်ထားရခြင်းမှာလည်း ၎င်း တို့ အနေနဲ့ အသည်းအသန်အားပေးသူများပြားလာရခြင်းမှာ ခေတ်ရှေ့ပြေး တဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ features အသစ်တွေကြောင့်ပါပဲ။
၎င်းတို့ရဲ့ အားသာချက်က နည်းပညာပြောင်းလဲ လာခြင်းကို အမြဲ မျက်စိဖွင့် ပြီး သူ့ ပစ္စည်းရဲ့ အရေအသွေး ကို ထိန်းသိမ်းထားလို့ ဖြစ်မယ်သိရပါတယ်။အခြား ပြိုင်ဘက် မိုဘိုင်လ်းဖုန်းထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းစုတွေက Apple ကို လိုက်တုကြတယ် ဈေးတွေကို ဈေးကွက်မှာ
လျော့ ပေါ့ ပြီး တစ်ဝက်ဈေးနည်းနည်း နဲ့ ရောင်းကျတယ် သို့ပေမဲ့ ( Think Different / ကွဲပြားခြားနားစွာတွေးပါ ) ဆိုတဲ့ သူမတူအောင်အများ နဲ့ မတူတဲ့ Apple ကို ဘယ်သူမှ မကျော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး Apple က သူ့ရဲ့ ပစ္စည်း အရည်အသွေးနဲ့ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေး ဗျူဟာတွေကိုက ကောင်းမွန်လွန်းတာကိုး။
Apple ဟာ သူ့ Brand ကို ကမ္ဘာ့နေရာ အသီးသီး မှာ ဖြန့်ကျက်ထားပြီး နိုင်ငံ ၄၀ မှာ ရှိပါတယ် အရောင်းဆိုင်အားဖြင့် ၅၁၂ ဆိုင်ရှိပါတယ်။၎င်းရဲ့ iPhone ပထမ မျိုးဆက်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ၊ ယခုဆို iPhone 11 Pro Max ထိတောင်ရောက်နေပါပြီ။
Online Store ကနေရောင်းချခြင်း
၁၉၉၇ မှာ Steve Jobs က Apple ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ Apple ကို ပြန်လာ ဆို သူတို့ လုပ်ငန်းစု နဲ့ Dell လုပ်ငန်းစု အချင်းများခဲ့လို့ပါ
ထိုစဉ် Dell ရဲ့ တည်ထောင်သူ ဖြစ်သူ နဲ့ CEO ဖြစ်သူ Michael Dell နဲ့ Apple ဘက်မှ စကားအနည်းငယ်ပြောခဲ့ပါတယ် ' Apple ကို ဘယ်လို ကောင်းအောင်လုပ်မယ် ' ဆိုတာကိုပေါ့။
ဒါကိုတောင်မှ Dell အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အစုရှယ်ရာငွေကိုသာ ပြန်လည်တောင်းယူခဲ့ပါတယ်။Dell ဟာ ထိုအချိန် တစ်ခေတ်တစ်ခါက အွန်လိုင်းဈေးရောင်း ခြင်း နဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ Online Store ကို NeXT နဲ့ တည်ဆောက်ထားကာ ရောင်းနေချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
" အကယ်၍ သင်အနေနဲ့ သင်အရမ်း စိတ်အားထက်သန်ပြီး စိတ်နှစ်ထားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်မယ်ဆိုရင် ,
သင့် ကို သင် တွန်းနေစရာ မလိုပါဘူး , သင့်ရဲ့ အမြင်တွေက သင့်ကို ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ် " ပြောကြားသူ Steve Jobs .
Steve က Apple ရဲ့ Founder ဖြစ်တဲ့ အလျှောက် Dell နဲ့ Apple စကားများ အချင်းပွား နေချိန် Apple ဆီကို ပြန်လာကာ NeXT က ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်နဲ့ ၎င်းတို့ Online Store ကို သူကိုယ်တိုင် စိတ်နှစ်ကာ တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအချိန် Steve Jobs စိတ်ထဲမှာရှိတာက ဈေးကွက်နဲ့ အကျွမ်းတဝင်ရှိဖို့ နည်းလမ်းက အွန်လိုင်း ကနေရောင်းချ ချင်းသာ ဖြစ်တယ် ဒါ့ထက် အွန်လိုင်းအရောင်း လောက မှာ Dell ထက်ခြေတစ်လှမ်းသာနေရမယ်ဆိုတာပါပဲ ။
၁၉၉၇ ရဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာ Apple ရဲ့ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်း ပွဲမှာ ၎င်းတို့ Online Store အကြောင်းကိုဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။
Apple ရဲ့ ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ အချက်များကို ပြောပြရမယ်ဆိုလျှင် -
၁ . ကြော်ငြာ ကိစ္စ ရပ်တွေအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ထပ်တလဲလဲ တွေးပါ
၂ . ဈေးကစားခြင်းကို ရှောင်ကြည်ပြီး သင့်အတွက်သင့်လျော်တဲ့ ပမာဏကိုသာမက်မောပါ
၃ . သင့်ရဲ့ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ Product ကို ရိုးရိုရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေပါစေ
၄ . သင့်ကို အားပေးတဲ့ လူတစ်စု ရဲ့အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိထားပါ
၅ . ကာစတန်မာတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ရှေးရှုပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
၆ . သင့် စိတ်ခံစားချက်အလိုက် ရည်မှန်းချက်ထားတတ်ပါစေ
၇ . သင့် Product ရဲ့ အသုံးပြုသူတွေနဲ့ Community တစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။
ထို အချက်တွေဟာ Apple ရဲ့အချက်အလက်ဗျူဟာ များဖြစ်ပြီး ၎င်း တို့ လုပ်ငန်းစု အနေနှင့်လည်း ယခုလက်ရှိမှာ အသုံးပြု နေတယ်သိရပါတယ်။သုတ အဖြစ်ဖတ်ရှုသူအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Ref ; People Magazine
Apple ရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျ Steve Jobs ရဲ့ ဘ၀ ပနျးခြီကားခပျြကိုဖျောပွတဲ့ဇာတျကား
Steve Jobs ရုပျရှငျ သုံးသပျခကျြ